Manchester City 2-1 Paris Saint-Germain, City oo Garoonkeeda ku garaacday PSG iskaga Xaadirisay Wareegta 16aad ee Champions league-ga | laacibfm.com
Home Laacib Manchester City 2-1 Paris Saint-Germain, City oo Garoonkeeda ku garaacday PSG iskaga...
Manchester City 2-1 Paris Saint-Germain, City oo Garoonkeeda ku garaacday PSG iskaga Xaadirisay Wareegta 16aad ee Champions league-ga
kooxda Manchester City ayaa iska xaadirisay Wareegta 16aad ee champions league-ga kadib guul ay ka gaartay kooxda PSG ee Dalka Faransiiska.
City oo gool looga hormaray kulankan ayaa ku badisay 2-1 waxana goolashada ka caawiyay Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus Halka Goolka PSG uu u saxiixay K. Mbappe.
Kooxda PSG ayaa hogaanka ciyaarta Qabatay daqiiqadii 50aad ee ciyaarta kadib kubad ay isku dhufsadeen Neymar iyo Messi uu banaanka soo dhigay xidiga Messi waxana si qurux badan u dhameestiray K. Mbappe.
Raheem Sterling ayaa goolkaasi ka barbareeyay kooxda PSG kubad lasoo qaaday isla markana banaanka lasoo dhigay waxaa lugta bidix ku dhameestiray xidiga Raheem Sterling oo kulankiisa labaad lagu soo daray shaxda macalinka.
Gabriel Jesus ayaa goolka guusha u dhaliyey Manchester City Daqiiqadii 77aad, isaga oo shabaqa ku hubsaday kubbad uu ka helay Bernardo Silva, taas oo uu dhulka ugu sii dhuftay Navas, shabaqiisana u dhaafiyey.
Previous articleLiverpool 2-0 FC Porto: Reds oo Guul Raaxo leh ka gaartay Port, Real Madrid oo badisay iyo Inter Milan oo dirqi ku soo baxday
Next articleMeeqo Koox ayaa u soo Baxday Wareega 16-ka Champions League, Goormee ayuuse dhacayaa isku aadka
@Reuters Tababaraha Italy Roberto Mancini ayaa lagu soo waramayaa inuu ku soo baxay inuu u sharaxan yahay shaqada joogtada ah ee Manchester United...
Jesse Lingard oo wali doonaya inuu ka tago Manchester United bisha...